March 19, 2018 By Buzz Myanmar News in ကျန်းမာရေး, ဗဟုသုတ, ဆေးပညာဆိုင်ရာ Tags: ECG, ဆေးခန်း, ဒေါက်တာနှင်း
ဒေါက်တာနှင်း ပဲခူးနယ်ဘက် ပုဂ္ဂလိက ဆေးခန်း တစ်ခုမှာ ထိုင်တော့ အရေးပေါ်လူနာ တစ်ယောက်အတွက် အိမ်ပင့်လာခေါ်ပါတယ်။ တအား အမော ဖောက်နေလို့ပါတဲ့…. အိမ်ကလည်းနောက်ဆုံး အခြေ အနေမို့လို့ လက်လျှော့ထားတာပေမဲ့ အသက်ကလေးတော့ လျှောလျှောလျှူလျှူ ထွက်စေချင်ပါသတဲ့လေ..။ ဆေးရုံကိုလွှဲစာရေးပေးမယ်ဆိုပေမဲ့..လူနာကဆေးရုံလုံးဝမသွားချင်လို့ပါ ဆရာမရယ် ဆိုတဲ့ အမေဖြစ်သူရဲ့ ငိုထားလို့ အစ်ဖောင်းနေတဲ့ မျက်နှာကြောင့် ဘာဖြစ်ဖြစ်လေ ဆိုပြီး လိုမယ်ထင်တဲ့ အောက်ဆီဂျင်တွေ ECG စက်တွေနဲ့ အရေးပေါ် ဆေး တချို့ ယူပြီးလိုက်သွားလိုက်တယ်။
ဟိုရောက်တော့ လူနာက တအားကိုဖျားနေတာ ..105’F နဲ့ သွေးခုန်နှုန်း ၁ မိနစ်ကို ၁၅၆ နဲ့ သွေးပေါင်က ၉၀/၆၀ …မြတ်စွာဘုရား…! … စအိုထဲ အဖျားကျဆေး ၁ တောင့်ထည့်။ဒေါက်တာနှင်း တစ်ယောက် အဲဒါတွေ အသက်မရှူစတမ်းလုပ်..လူနာ pulse ( သွေးခုန်ူနှုန်း ) လေး ကိုင်ပြီး ဘုရား တ ကာ ထိုင်စောင့်နေရသည်။ နာရီဝက်လောက်ကြာတော့ လူနာ အခြေအနေက ငြိမ်သွားပြီ… အဖျားတော့ မကျသေးပေမဲ့ သွေးပေါင်လေး က ၁၀၀/၇၀ သွေးခုန်နှုန်းလေးက ၁၀၄ … တော်တော်လေးအဆင်ပြေလာပြီလို့ ယူဆလို့ရတော့မှ လူနာ ပတ်ဝန်းကျင်ကိုသတိထားမိသည်။
ဝိုင်းအုံကြည့်နေသောမိသားစုတွေက တပြုံ… ပြီးတော့ အနံ့… ခုန က အသက်မရှူစတမ်း လုပ်နေတော့ ဒီ အနံ့ကို ဒေါက်တာနှင်း သတိမထားမိ… အခုတော့ သတိထားစရာပင်မလိုလောက်အောင် အနံ့ က စူးရှဆိုးဝါးလှသည်။ လူနာကိုကြည့်တော့ ကလေးမလေးက အသက် ၂၀ ပတ်ချာလည်လောက် .. စောင်ပါးလေးတစ်ထည် ကို ခါးစောင်းထိအုပ်ကာ ကုတင်ပေါ် တစ်ဝက်မှီ အနေထားနှင့် လျှောလျှောကလေးထိုင်ပြီး အသက်ကို မျှင်းရှူနေသည်။ ဘုရားရေ… ငယ်ငယ်ချောချော ကလေးပါတကား!
” လူနာက အခု အရေးပေါ် အခြေအနေတော့ ကျော်သွားပါပြီ… လူနာ အကြောင်း အကုန်သိတဲ့ လူ တစ်ယောက်နေခဲ့ပြီး ကျန်တဲ့လူတွေ အပြင်ခဏထွက်ပါနော်” ဆိုတော့ အိမ်ပင့်လာသူ အမေ့ဆီက ရှိုက်သံရောသော သက်ပြင်းရှည် တစ်ခုကို ကြားရသည်။
“ဆရာမလေးရယ် … ” အစချီပြီး လူနာအကြောင်းသိရသည်မှာ …
ကလေးမလေးက စာသိပ်တော်သည် … ဆယ်တန်းကို ၃ ဘာသာဂုဏ်ထူးနှင့်အောင်တော့ emajor တတ်..ဘွဲ့ရတော့ သံရုံးက ရာထူးဝင်စာမေးပွဲဝင်ဖြေပြီးလို့ အရာရှိပေါက်စလေးတောင်ဖြစ်နေပြီဆိုပါတော့။ လွန်ခဲ့တဲ့ နှစ်ပိုင်းကစပြီး ကလေးမလေးရဲ့ ညာဘက်ခြေထောက်က ကြွက်ခဏခဏ တက် သတဲ့။ တစ်ဖက်ထဲကိုပဲ ကွက်ပြီး ခဏခဏ တက်တာမို့ထူးဆန်းပေမယ့်လည်း အားဆေးစားဘာစား နဲ့နေတာပေါ့လေ။
၂လ ၃လ လောက်ကြာတော့ ကြွက်မတက်တော့ပဲ ဒူးဆစ်ကနေ တစစ်စစ် ကိုက်လာသတဲ့။ ဆေးပူကလေးလိမ်းလိုက် …. အကိုက်အခဲပျောက်ဆေးလေးသောက်လိုက် ကနေ တဖြည်းဖြည်း ကိုက်တာ စိတ်လာတော့ ဆေးခန်းသွားဆေးထိုး.. တရုပ်ဆေးစည်းနဲ့ မျိုးစုံလုပ်ကြည့်သေးတာ။
မခံနိုင်တော့တဲ့ အဆုံး ရန်ကုန်က အရိုးဆေးရုံ ပြေး.. အရိုးအထူးကုဆရာဝန်ကြီးနဲ့ပြတာပေါ့လေ။ ပညာလည်းပြည့်စုံ..မိဘကလည်းပြည့်စုံ တဲ့ ဥစ္စာပေါရုပ်ချော ကလေးမလေး ခမျာ လောကဓံရိုက်ချက်ကတော့ ပြင်းရှာတယ်။ ကင်ဆာတဲ့… အသားစယူအတည်ပြုပြီးတဲ့အခါမှာတော့ ရှားရှားပါးပါး liposarcoma အမျိုးအစား အရိုးကင်ဆာပါတဲ့။ သိပြီး ချက်ချင်းပဲ ကင်ဆာဆေးသွင်းကုသခြင်းနဲ့ ဓာတ်ကင်ခြင်းတွေ လုပ်ရတော့ ကလေးက စိတ်ထောင်းကိုယ်ကြေပြီး ပါးလှပ်လှပ်ဖြစ်လာရော။
နောက်တော့ ကုသပေးနေတဲ့ အရိုးအထူးကု ဆရာဝန်ကြီးက မိဘတွေနဲ့ လူနာကိုခေါ်ပြီး ရှင်းပြတယ်။ ကံကောင်းစွာနဲ့ ကလေးမလေးမှာ secondary metastasis လို့ခေါ်တဲ့ ဆင့်ပွားကင်ဆာမြစ်တွေ ပေါ်မလာသေးတဲ့အတွက် ခွဲစိတ်လို့ရနိုင်တယ်..ဒီရောဂါကို ကုသဖို့ရာ ခွဲစိတ်ကုသနည်း ၂ မျိုးရှိတယ် ပေါ့။ အသေးစိတ်တော့မရေးတော့ပါဘူး။ အဲ့မှာ ကလေးမလေးက ခွဲစိတ်ဖို့ကိုလုံးဝသဘောမတူဘူး။
ဆရာကြီးရှင်းပြလိုက်တုန်းကတော့ ဒုတိယနည်းက လုပ်ကြည့်မယ်လို့တွေးပေမယ့် အင်တင်တင်ဖြစ်နေတာနဲ့ ဆရာကြီးက အခု ဆေးသွင်းထားတာရော ဓာတ်ကင်ထားတာရောကြောင့်အားနည်းနေသေးတယ်… ထူထူထောင်ထောင်ဖြစ်လာပြီဆိုရင် ခွဲစိတ်ဖို့ပြန်ဆွေးနွေးမယ်ပေါ့။ လောလောဆယ် အသားစယူထားတဲ့အနာကို နီးစပ်ရာဆေးရုံဆေးခန်းမှာ ဆေးမှန်မှန်ထည့် …. ဂရုစိုက်ဆိုပြီး ရက်ချိန်းပေး ..အိမ်ခဏပြန်နားခိုင်းတယ်။
ပြဿနာက ဒီမှာစတယ်။ အိမ်လည်းပြန်ရောက်ရော…. စေ့စေ့တွေး ရေးရေးပေါ် ဆိုသလို ခွဲရမယ့် ကိစ္စ ကိုတွေးရင်းကြောက်လာတယ်…. ခြေထောက်ကိုက်ရုံလေးနဲ့ ဒီလောက် ထိ လုပ်ရမယ်ဆိုတာကို မယုံနိုက်ဖြစ်လာတယ်…. ခွဲစိတ်ပြီးလည်း ဒုက္ခိတ သာသာ ဘဝနဲ့နေရမှာ ကို စိတ်ဓာတ်ကျလာတယ်။ အဲမှာ မခွဲချင်တော့ဘူး သူ့ကို အတင်းအကြပ်မလုပ်ပါနဲ့ ဆိုပြီး ငိုယို ဆန္ဒပြရော။ ဆေးရုံထပ်သွားဖို့ကို ခေါ်မရတော့ဘူး။ အထွေးဆုံးသမီးလေးမို့ အိမ်ကလည်း တအား အလိုလိုက်တယ်။
ကဲ….အင်္ဂလိပ်ဆေးနဲ့ မကုချင်ရင် ဗမာဆေးနဲ့ကုကြည့်ပါလား ဆိုတဲ့ဆွေမျိုးတစ်သိုက်ရဲ့ အကြံပေးချက်နဲ့ သိပ်ကောင်းတာပဲဆိုပြီးဘာကောင်းမှန်မသိ နာမည်ကြီးတဲ့ ဗမာဆရာဆီရောက်သွားရော။ အဲ့ဒီမှာ.. ဆေးဆရာက အသားစယူထားတဲ့နေရာက အနာ ချုပ်ရိုးလေးကိုဖြုတ် ..အသာလေးဟ…ပြီးဆေးတစ်မျိုးအုံပေးပြီး ပတ်တီးစည်း ပြန်လွှတ်လိုက်သတဲ့။
နောက်တစ်ပတ်ပြန်လာပါ… ရေမထိ ညှော်မခံရ ဆိုပြီးလည်းမှာလိက်သေးတယ်ပေါ့။ အိမ်ရောက်တော့ ခါတိုင်းဆို ညညကိုက်လို့ စအိုထဲ အကိုက်အခဲပျောက်ဆေးထည့်ရ…. tramadol လို ဆေးပြင်းတွေသောက်ရ…ဆေးထိုးရတဲ့ အထိ ဒုက္ခပေးတဲ့ ခြေထောက် က ခု သူမဟုတ်သလိုပဲ… သိပ်မကိုက်တော့ပဲ..နေလို့ အိပ်လို့ရလာတယ်။
အဲဒါနဲ့…ဆရာသည်သာ အမိ..အဖ …အားကိုးရာ ဆိုတာမျိုးဖြစ်လာပြီး… နောက်တစ်ပတ်လည်းပျော်ပျော်ကြီးသွားတယ်…သက်သားလိုက်တာပေါ့။ ဒီလိုနဲ့နေလာလိုက်တာ တဖြည်းဖြည်းနဲ့ နာတာက ဖုံးထားလို့မရတော့ဘူး… ဆရာလည်း မစွမ်းနိုင်တော့ဘူး… သတိထားမိတဲ့ အချိန်မှာ အနာက ပြဲလိုက်လာပြီး ပြည်တွေတည် အနံ့ထွက်စပြုပြီ။
” ဟယ်….အဲဒါတောင် ဆေးရုံမသွားဘဲ ဘာလို့ပေခံနေလဲ?” လို့ ဂရုဏာ ဒေါသ နဲ့မေးတော့ အသက်ကို ဖုတ်လှိုက်ဖုတ်လိုက်ရှူနေတဲ့ လူနာက ဝင်ဖြေတယ်။ ” ရှက်လို့” ပါတဲ့။ ကလေးမလေးမျက်နှာကိုကြည့်ပြီး ဒေါက်တာနှင်း မဆူရက်တော့။ အစောနက သူ့ကို para suppo ထည့်ဖို့ ညာဘက်စောင်းခိုင်းတုန်းက သူဘာလို့ တကျွတ်ကျွတ်ညည်းသလဲဆိုတာနဲ့ အခန်းထဲက အလွန်အမင်းဆိုးဝါးစူရှစွာထွက်ပေါ်နေတဲ့ အပုပ်နံ့ တို့ရဲ့ အဖြေက ရှင်းသွားပါပြီ။
အနာကို ကြည့်ဖို့လုပ်တော့ သူ့ အမေ က mask လေးယူလာပေးတယ်။ အပေါ်က အုပ်ထားတဲ့ ပတ်တီးစကို ခွာချအပြီးမှာ ပတ်တီးစတွေနဲ့သိပ်ထားတဲ့ အနာဝကိုမြင်ရပါတယ်။ အနားသားတွေ မည်းနေပြီး မျက်နှာဝချည်းပဲ ၄-၅ လက်မလောက်ရှိတဲ့ အနာကြီးက ညာဒူးအတွင်းဘက် ဒဂေါက်ခွက်နားမှာ ဒူးဆစ်ပြညိ့လုနီးပါးနေရာယူထားလေပြီ။ အထဲက ပတ်တီးစတွေကို ဖြည်းဖြည်းချင်းဆွဲထုတ်တော့ အနံ့က အုပ်ထားတဲ့ mask ကိုကျော်ပြီး ထောင်းကနဲ့…။
ပတ်တီးကုန်တော့ အနာအောက်ခြေက လက်တစ်နှိုက်မျှ…ဒူးဆစ်အောက်နားခြေသလုံးသား ကို တစ်ဝက်လောက်လှိုက်စားထားပြီး ခြေသလုံးရိုးကိုပါမြင်နေရပြီ…ဘေးတိုက်တင်မဟုတ် … အောက်ကိုပါဆင်းပြီး အစွေလိုက် လှိုက်စားထားသည်မှာ ခြေသလုံးတစ်ဝက်လောက်ရောက်နေပြီဖြစ်ရာ တစ်ဖက်က စွေပြီးခုတ်ဖြတ်ထားသော ဝါးဆစ်ပိတ်ကဲ့သို ခွက်ကြီးဖြစ်နေလေပြီ။ အနာ နံရံနဲ့ အောက်ခြေ ကြမ်းပြင်တစ်ခုလုံး ပြည်စိမ်းစိမ်းတို့ကနေရာယူထားရာ အသားနုပင်မတွေ့…သြော် မမြင်ဝံ့ဆေးဆရာပါတကား။
” အမေရယ်… ကလေးက ဒီလောက်ဖြစ်နေတာကို…. ဒီလောက် အလိုလိုက်ပြီးထားရသလား?” လို့မာန်တော့ ” ဒီတိုင်းမထားပါဘူး ဆရာမရယ်… အရပ်ထဲက သားဖွားဆရာမလေးခေါ်ပြီး ဆေးထည့် ဆေးထိုးလုပ်ပါတယ်” တဲ့။ ဆရာမလေးက ညနေတိုင်းလာပြီး အနာကို အရက်ပြန်နဲ့ လောင်းဆေးတယ် …ပြီးရင် ဆေးဝါလေး လောင်းထည့် …ပတ်တီးတွေနဲ့ ပြန်ဆို့ပြီးပိတ်ပေးတယ်… တစ်ရက်ခြားတစ်ခါလည်းဆေးထိုးသတဲ့။ ကြည့်လိုက်တော့ ampiclox တွေ။
“မြတ်စွာဘုရား …. ပိုးသတ်ဆေး ကို တစ်ရက်ခြားတစ်ခါ ထိုးတော့ ပိုးတွေကို ဆေးယဉ်အောင်လုပ်ပြီးမွေးသလိုဖြစ်နေရောပေါ့။ ပြီးတော့ ဒီလောက်ကြီးတဲ့ အနာကို အရက်ပြန်လောင်းပြီးဆေးမှတော့ လူနာက နာလွန်းလို့သေမှာပဲ…တကယ်ပြောတာ … နာလွန်းရင် pain shock နဲ့သေတတ်တယ် အမေရဲ့” ဆိုတော့
ကလေးမလေးက ” ဟုတ်တယ်ဆရာမ…. ဆေးတစ်ခါထည့်ရင် သေမလိုအော်ရတယ်… အရှင်လတ်လတ် ငရဲကျသလိုပဲ” တဲ့! ဆက်မေးနေလည်း ပေါက်ကရလေးဆယ် တွေ ထပ်ထွက်လာမဲ့ တူတူ ဆေးရုံတက်ဖို့ဆွယ်တရားဟောရသည်။
” အမေ… အမေ့ သမီး ခုလိုဖျားနေ …သွေးပေါင်တွေကျ … သွေးခုန်နှုန်းတွေမြန်… အမောတွေဖောက်ဖြစ်နေတာ ဒီလို အနာကို မွေးထားလို့ … အနာက ပိုးဝင်နေပြီ… ဘယ် အတိုင်းအတာထိဆိုးနေတယ် ဆိုတာ အမေတို့မျက်မြင်ရုံမက အနံ့ပါရနေပြီမဟုတ်လားလို့?? အနာထဲက ပိုးက သွေးထဲရောက်ပြီး ပိုးဆိပ်ပျံ့တဲ့ အခါ အမေ့သမီး ဒုက္ခရောက်မယ်… ကင်ဆာက ခု ချက်ချင်း မသေဘူး… အသက်နဲ့အဝေးကြီးရှိသေးတယ်…ဒီအနာကြောင့် သေလိမ့်မယ်… ဆေးရုံ အမြန်ဆုံးတက်ပါ” ဆိုတော့ အမေရော သမီးရော ငိုပါရော..။ ချော့တစ်ခါ ခြောက်တစ်လှည့်ပြောပြီးနောက်တော့ သူ့ အဖေ ရန်ကုန်ကပြန်လာတာနဲ့ ဆေးရုံတင်ပါမယ် တဲ့… ဘယ်လောက်ကြာဦးမလဲဆိုတော့ ၁ ပတ် ၂ ပတ် ပေါ့
ဆရာမရယ် တယ်…။ ဟယ်… မတက်ခင် စပ်ကြား သေသွားရင် ဘယ်လို လုပ်မလဲ ဆိုတော့ ဆရာမနဲ့ ကုမယ်တယ်။ စိတ်တွေလည်းညစ်ပါတယ်။ ” အမေ ဒီရောဂါ က ကျွန်မ ကုရုံနဲ့ မရဘူး… ရမှတော့ အမေ့ သမီးကို ဆေးရုံလွှတ်နေမလား” ပြောတာ့ … တုံဏှိဘာဝေ။ ” ဒါဖြင့် လောလောဆယ်….ကျွန်မဆေးခန်းလာထိုင်တဲ့ရက်ကို ဆေးထည့်ပေးမယ်… Wound swab လည်း ယူမယ်! ကလေး အဖေ လာတာနဲ့ ချက်ချင်းဆေးရုံတက်ပါ” ဆိုတော့ “ဟုတ်ကဲ့ပါ” တဲ့။ ဒီတိုင်းလည်းမထားနိုင်တဲ့ အတူတူ wound swab culture and sensitivity ယူဖို့ပြင်ရတော့တယ်။ ဆေးခန်းက လေးလေး က သူပို့ပေးမယ်…အမြန်ဆုံး ဆို (၅) ရက်ကြာမယ်တဲ့။
မတတ်နိုင်…ဆေးရုံ မတက်ခင် လုပ်စရာရှိတာတော့ လုပ်ပေးထားရမယ် မဟုတ်လား။ wound swab ယူ… အနာကို normal saline နဲ့ တစ်ထပ်…hydrogen peroxide နဲ့ တစ်ထပ်ဆေး…iodine နဲ့ အနာပတ်လည်ရော အနာထဲရော သန့်ရှင်းရေလုပ်… ပြီးတော့မှ ပေါင်းထားတဲ့ ပတ်တီးကို eusol နဲ့စိမ်ပြီး အနာကို ဖြည့်ပိတ်ပေးရသည်ပေါ့…အဲဒါကို .လေးလက်မ ပတ်တီး ၅ လိပ်ကုန်ပါတယ် အရပ်ကတို့။ ဘယ်လောက်ကြီးတဲ့ အနာလည်း စဉ်းစားသာကြည့်ကြပါကုန်။ wound swab c & S အဖြေရရင် ဒီအနာမှာ ဘာ ဘတ်တီးရီးယား ပေါက်နေလဲ… ဘာပိုးသတ်ဆေး နဲ့ဆိုနိုင်မလဲ ကြည့်ပြီး ဆေးပေးလို့ရပေမဲ့ ခုကတော့ ရိုးရိုး အဖျားကျဆေးနဲ့ broad-spectrum antibiotics ပဲပေးထားလို့ရတော့ ဒီကြားထဲ တစ်ခုခုဆိုလျှင် ပေပြီးအိမ်မှာမနေဘဲ ဆေးရုံပြေးဖို့လည်း မှာရသေးတာပေါ့လေ။ wound swab result ကတော့ နောက်တစ်ပတ် ကိုယ် ဆေးခန်းပြန်လာထိုင်တဲ့ချိန် ရကောင်းပါရဲ့။
ပြန်လာပြီး ၁ ရက်ပဲရှိသေးတယ် … ဆေးခန်းက လေးလေးဆီက ဖုန်းလာရော။ ဧကန္တ wound swab result များ အစောကြီးသိရလို့လား ဆိုပြီး တွေးတုန်း ” သမီးရေ….ကလေးမလေး ဆုံးပြီ” တဲ့! ရုတ်တရပ်..အဖျားတွေတက် အမောဖောက်ပြီး ဆုံးတာမို့ ဆရာဝန်သွားခေါ်တာတောင်မမီလိုက်ဘူး” တဲ့လေ။ ပန်းလေး တစ်ပွင့်ကတော့ အချိန်မတန်ဘဲကြွေရှာပါပြီ။ ရိုးရိုးမဟုတ်ဘဲ တမင်အခြွေခံရသလို ပဲ ထင်မိပါတယ်။
ဆေးရုံတက်ရမှာ ကြောက်လို့… ခွဲရမှာကြောက်လို့နဲ့ ပန်းလေးတွေ ဘယ်နှပွင့် လောက်များ အညှာကနေ ဆွဲယူခြေမွ ခံရပြီးပြီလဲ။ ဒေါက်တာ နှင်းတို့ ဆေးကျောင်းတတိယနှစ်မှာ ရက်တိုတိုင်းရင်းဆေး သင်တန်း ပို့ချမှုရှိပါတယ်။ ဒီ တိုင်းရင်းဆေးပညာဆိုတာ စစ်မှန်ရင် သိပ်တန်ဖိုးကြီးတဲ့ပညာပါ။ ဒါပေမယ့်… လာသင်ပေးတဲ့ တိုင်းရင်းဆေး ဆရာမကြီးတစ်ယောက်ရဲ့ စကားကို ဒေါက်တာနှင်း ခုထိကြားယောင်ဆဲ။
“အပြင်မှာ ဗမာဆေးဆရာဆိုပြီး ဆေးကုနေသူတွေထဲ တိုင်းရင်းဆေး လက်မှတ်ရပြီးတကယ်တတ်ကျွမ်းနားလည်တဲ့ လူက ၃၀ မှာ ၁ ယောက်မရှိဘူး ကလေးတို့ရေ” တဲ့။တိုင်းရင်းဆေး ဆိုတာ ရတနာလိုပါပဲ… စစ်မှန်ရင်တန်ဖိုးကြီးသလောက် အတုအပတွေကလည်း ပေါပြီး ခွဲခြားရ ခက်လှပါတယ်။ အခု ကလေးမလေး အမေ ပြောသွားတဲ့ထဲက ” ဆေးထည့်ပြီး အနာက မကိုက်တော့ဘူး” ဆိုတာလေးကို ရှင်းပြချင်ပါတယ်။
ဒီဗမာဆေးဆရာ အမည်ခံတော်တော်များများက ဆေးထဲမှာ steroid ဆေးသုံးပါတယ်။ ဒီဆေးရဲ့ သဘောတရား က ရောဂါ လက္ခဏာကို ဖုံးထားပေးနိုင်ပြီး နေလို့ထိုင်လို့ကောင်းစေပါတယ် (sense of well-being) … နာနေရင် သက်သာမယ်..ယောင်နေရင် အယောင်ကျမယ်… ရောဂါပျောက်တာလား ဆိုရင်မဟုတ်ပါဘူး… ဒီလိုဖုံးထားပေးတဲ့ အတွက် ရှိရင်းစွဲ အခံရောဂါ ကို မရှိတော့ဘူး ထင်ပြီး ဂရုမစိုက်နေရာမှ ရောဂါပိုကြွလာတတ်ပါတယ်။ နောက်ပြီး steroid ကို နာတွေမှာ မသုံးရပါဘူး…အရောဂါပိုး ကိုဖိတ်ခေါ်သလိုဖြစ်စေလို့ပါ!!
(၁) သွေးထဲမှာ သကြားဓာတ်များလာမယ်.. သကြားဆိုတာ ဘတ်တီးရီယား တွေ အကြိုက်ပါ။( သွေးချို ဆီးချို သမားတွေ အနာ မကျက်နိုင်တာသာ ကြည့်တော့) ။
(၂) ဘတ်တီးရီးယားကို တိုက်ထုတ်ပေးမယ့် သွေးဖြူဥ အရေအတွက်ကိုလျော့ကျစေတယ်။
(၃) ကိုယ်ခံအား ( immune ) ကိုကျစေတယ်
အဲလိုဆေးကို အနာထဲထည့်တော့ နာတာ ခဏ သက်သာပေမယ့် ပိုးဝင်ပြီး ဘတ်တီးရီယား တွေ စိတ်ကြိုက်ပေါက်ပွားတော့ ပိုဆိုးလာရင်း ခုလို septic shock ( သွေးထဲ ပိုးဆိပ်ပျံ့) ရာက အသက်ဆုံးတဲ့ အထိ ဖြစ်သွားတာပါပဲ။ ကင်ဆာ နဲ့ သေဖို့က ဟိုး အဝေးကြီးလိုပါသေးတယ်။ ဒီလောက်မြန်မြန် မသေသင့်ဘဲ ဘာလို့ သေရသလဲဆိုတော့ မကြောက်သင့် မရှက်သင့်တာ ကို ကြောက်ပြီးရှက်ပြီး လုပ်သင့်လုပ်ထိုက်တာကို အချိန်မီ မလုပ်ဘဲ အားမကိုးသင့်တာကို အားကိုးမိလို့ပါပဲ။ သူမရဲ့ အကြောင်းလေးကို လူတွေသိပြီး မဖြစ်သင့်တာမဖြစ်အောင်ရှောင်နိုင်ကြဖို့ ဒီစာလေးကိုရေးတာမို့ သူမလည်းရောက်ရာဘဝကနေ ကျေနပ်ဝမ်းသာ ပေးနိုင်လိမ့်မယ် မျှော်လင့်ရင်း….။
Credit : On Doctor app
ကြားကွောကျလို့ ရှငျကွီးကိုး …ရှငျကွီးကြားထကျဆိုး..
ဒေါကျတာနှငျး ပဲခူးနယျဘကျ ပုဂ်ဂလိကဆေးခနျးတဈခုမှာ ထိုငျတော့ အရေးပျေါလူနာတဈယောကျအတှကျ အိမျပငျ့လာချေါပါတယျ။ တအား အမော ဖောကျနလေို့ပါတဲ့…. အိမျကလညျးနောကျဆုံး အခွေ အနမေို့လို့ လကျလြှော့ထားတာပမေဲ့ အသကျကလေးတော့ လြှောလြှောလြှူလြှူ ထှကျစခေငျြပါသတဲ့လေ..။ ဆေးရုံကိုလှဲစာရေးပေးမယျဆိုပမေဲ့..လူနာကဆေးရုံလုံးဝမသှားခငျြလို့ပါ ဆရာမရယျ ဆိုတဲ့ အမဖွေဈသူရဲ့ ငိုထားလို့ အဈဖောငျးနတေဲ့ မကျြနှာကွောငျ့ ဘာဖွဈဖွဈလေ ဆိုပွီး လိုမယျထငျတဲ့ အောကျဆီဂငျြတှေ ECG စကျတှနေဲ့ အရေးပျေါ ဆေး တခြို့ ယူပွီးလိုကျသှားလိုကျတယျ။
ဟိုရောကျတော့ လူနာက တအားကိုဖြားနတော ..105’F နဲ့ သှေးခုနျနှုနျး ၁ မိနဈကို ၁၅၆ နဲ့ သှေးပေါငျက ၉၀/၆၀ …မွတျစှာဘုရား…! … စအိုထဲ အဖြားကဆြေး ၁ တောငျ့ထညျ့။ဒေါကျတာနှငျး တဈယောကျ အဲဒါတှေ အသကျမရှူစတမျးလုပျ..လူနာ pulse ( သှေးခုနျူနှုနျး ) လေး ကိုငျပွီး ဘုရား တ ကာ ထိုငျစောငျ့နရေသညျ။ နာရီဝကျလောကျကွာတော့ လူနာ အခွအေနကေ ငွိမျသှားပွီ… အဖြားတော့ မကသြေးပမေဲ့ သှေးပေါငျလေး က ၁၀၀/၇၀ သှေးခုနျနှုနျးလေးက ၁၀၄ … တျောတျောလေးအဆငျပွလောပွီလို့ ယူဆလို့ရတော့မှ လူနာ ပတျဝနျးကငျြကိုသတိထားမိသညျ။
ဝိုငျးအုံကွညျ့နသေောမိသားစုတှကေ တပွုံ… ပွီးတော့ အနံ့… ခုန က အသကျမရှူစတမျး လုပျနတေော့ ဒီ အနံ့ကို ဒေါကျတာနှငျး သတိမထားမိ… အခုတော့ သတိထားစရာပငျမလိုလောကျအောငျ အနံ့ က စူးရှဆိုးဝါးလှသညျ။ လူနာကိုကွညျ့တော့ ကလေးမလေးက အသကျ ၂၀ ပတျခြာလညျလောကျ .. စောငျပါးလေးတဈထညျ ကို ခါးစောငျးထိအုပျကာ ကုတငျပျေါ တဈဝကျမှီ အနထေားနှငျ့ လြှောလြှောကလေးထိုငျပွီး အသကျကို မြှငျးရှူနသေညျ။ ဘုရားရေ… ငယျငယျခြောခြော ကလေးပါတကား!
” လူနာက အခု အရေးပျေါ အခွအေနတေော့ ကြျောသှားပါပွီ… လူနာ အကွောငျး အကုနျသိတဲ့ လူ တဈယောကျနခေဲ့ပွီး ကနျြတဲ့လူတှေ အပွငျခဏထှကျပါနျော” ဆိုတော့ အိမျပငျ့လာသူ အမဆေီ့က ရှိုကျသံရောသော သကျပွငျးရှညျ တဈခုကို ကွားရသညျ။
“ဆရာမလေးရယျ … ” အစခြီပွီး လူနာအကွောငျးသိရသညျမှာ …
ကလေးမလေးက စာသိပျတျောသညျ … ဆယျတနျးကို ၃ ဘာသာဂုဏျထူးနှငျ့အောငျတော့ emajor တတျ..ဘှဲ့ရတော့ သံရုံးက ရာထူးဝငျစာမေးပှဲဝငျဖွပွေီးလို့ အရာရှိပေါကျစလေးတောငျဖွဈနပွေီဆိုပါတော့။ လှနျခဲ့တဲ့ နှဈပိုငျးကစပွီး ကလေးမလေးရဲ့ ညာဘကျခွထေောကျက ကွှကျခဏခဏ တကျ သတဲ့။ တဈဖကျထဲကိုပဲ ကှကျပွီး ခဏခဏ တကျတာမို့ထူးဆနျးပမေယျ့လညျး အားဆေးစားဘာစား နဲ့နတောပေါ့လေ။
၂လ ၃လ လောကျကွာတော့ ကွှကျမတကျတော့ပဲ ဒူးဆဈကနေ တစဈစဈ ကိုကျလာသတဲ့။ ဆေးပူကလေးလိမျးလိုကျ …. အကိုကျအခဲပြောကျဆေးလေးသောကျလိုကျ ကနေ တဖွညျးဖွညျး ကိုကျတာ စိတျလာတော့ ဆေးခနျးသှားဆေးထိုး.. တရုပျဆေးစညျးနဲ့ မြိုးစုံလုပျကွညျ့သေးတာ။
မခံနိုငျတော့တဲ့ အဆုံး ရနျကုနျက အရိုးဆေးရုံ ပွေး.. အရိုးအထူးကုဆရာဝနျကွီးနဲ့ပွတာပေါ့လေ။ ပညာလညျးပွညျ့စုံ..မိဘကလညျးပွညျ့စုံ တဲ့ ဥစ်စာပေါရုပျခြော ကလေးမလေး ခမြာ လောကဓံရိုကျခကျြကတော့ ပွငျးရှာတယျ။ ကငျဆာတဲ့… အသားစယူအတညျပွုပွီးတဲ့အခါမှာတော့ ရှားရှားပါးပါး liposarcoma အမြိုးအစား အရိုးကငျဆာပါတဲ့။ သိပွီး ခကျြခငျြးပဲ ကငျဆာဆေးသှငျးကုသခွငျးနဲ့ ဓာတျကငျခွငျးတှေ လုပျရတော့ ကလေးက စိတျထောငျးကိုယျကွပွေီး ပါးလှပျလှပျဖွဈလာရော။
နောကျတော့ ကုသပေးနတေဲ့ အရိုးအထူးကု ဆရာဝနျကွီးက မိဘတှနေဲ့ လူနာကိုချေါပွီး ရှငျးပွတယျ။ ကံကောငျးစှာနဲ့ ကလေးမလေးမှာ secondary metastasis လို့ချေါတဲ့ ဆငျ့ပှားကငျဆာမွဈတှေ ပျေါမလာသေးတဲ့အတှကျ ခှဲစိတျလို့ရနိုငျတယျ..ဒီရောဂါကို ကုသဖို့ရာ ခှဲစိတျကုသနညျး ၂ မြိုးရှိတယျ ပေါ့။ အသေးစိတျတော့မရေးတော့ပါဘူး။ အဲ့မှာ ကလေးမလေးက ခှဲစိတျဖို့ကိုလုံးဝသဘောမတူဘူး။
ဆရာကွီးရှငျးပွလိုကျတုနျးကတော့ ဒုတိယနညျးက လုပျကွညျ့မယျလို့တှေးပမေယျ့ အငျတငျတငျဖွဈနတောနဲ့ ဆရာကွီးက အခု ဆေးသှငျးထားတာရော ဓာတျကငျထားတာရောကွောငျ့အားနညျးနသေေးတယျ… ထူထူထောငျထောငျဖွဈလာပွီဆိုရငျ ခှဲစိတျဖို့ပွနျဆှေးနှေးမယျပေါ့။ လောလောဆယျ အသားစယူထားတဲ့အနာကို နီးစပျရာဆေးရုံဆေးခနျးမှာ ဆေးမှနျမှနျထညျ့ …. ဂရုစိုကျဆိုပွီး ရကျခြိနျးပေး ..အိမျခဏပွနျနားခိုငျးတယျ။
ပွဿနာက ဒီမှာစတယျ။ အိမျလညျးပွနျရောကျရော…. စစေ့တှေ့ေး ရေးရေးပျေါ ဆိုသလို ခှဲရမယျ့ ကိစ်စ ကိုတှေးရငျးကွောကျလာတယျ…. ခွထေောကျကိုကျရုံလေးနဲ့ ဒီလောကျ ထိ လုပျရမယျဆိုတာကို မယုံနိုကျဖွဈလာတယျ…. ခှဲစိတျပွီးလညျး ဒုက်ခိတ သာသာ ဘဝနဲ့နရေမှာ ကို စိတျဓာတျကလြာတယျ။ အဲမှာ မခှဲခငျြတော့ဘူး သူ့ကို အတငျးအကွပျမလုပျပါနဲ့ ဆိုပွီး ငိုယို ဆန်ဒပွရော။ ဆေးရုံထပျသှားဖို့ကို ချေါမရတော့ဘူး။ အထှေးဆုံးသမီးလေးမို့ အိမျကလညျး တအား အလိုလိုကျတယျ။
ကဲ….အင်ျဂလိပျဆေးနဲ့ မကုခငျြရငျ ဗမာဆေးနဲ့ကုကွညျ့ပါလား ဆိုတဲ့ဆှမြေိုးတဈသိုကျရဲ့ အကွံပေးခကျြနဲ့ သိပျကောငျးတာပဲဆိုပွီးဘာကောငျးမှနျမသိ နာမညျကွီးတဲ့ ဗမာဆရာဆီရောကျသှားရော။ အဲ့ဒီမှာ.. ဆေးဆရာက အသားစယူထားတဲ့နရောက အနာ ခြုပျရိုးလေးကိုဖွုတျ ..အသာလေးဟ…ပွီးဆေးတဈမြိုးအုံပေးပွီး ပတျတီးစညျး ပွနျလှတျလိုကျသတဲ့။
နောကျတဈပတျပွနျလာပါ… ရမေထိ ညှေျာမခံရ ဆိုပွီးလညျးမှာလိကျသေးတယျပေါ့။ အိမျရောကျတော့ ခါတိုငျးဆို ညညကိုကျလို့ စအိုထဲ အကိုကျအခဲပြောကျဆေးထညျ့ရ…. tramadol လို ဆေးပွငျးတှသေောကျရ…ဆေးထိုးရတဲ့ အထိ ဒုက်ခပေးတဲ့ ခွထေောကျ က ခု သူမဟုတျသလိုပဲ… သိပျမကိုကျတော့ပဲ..နလေို့ အိပျလို့ရလာတယျ။
အဲဒါနဲ့…ဆရာသညျသာ အမိ..အဖ …အားကိုးရာ ဆိုတာမြိုးဖွဈလာပွီး… နောကျတဈပတျလညျးပြျောပြျောကွီးသှားတယျ…သကျသားလိုကျတာပေါ့။ ဒီလိုနဲ့နလောလိုကျတာ တဖွညျးဖွညျးနဲ့ နာတာက ဖုံးထားလို့မရတော့ဘူး… ဆရာလညျး မစှမျးနိုငျတော့ဘူး… သတိထားမိတဲ့ အခြိနျမှာ အနာက ပွဲလိုကျလာပွီး ပွညျတှတေညျ အနံ့ထှကျစပွုပွီ။
” ဟယျ….အဲဒါတောငျ ဆေးရုံမသှားဘဲ ဘာလို့ပခေံနလေဲ?” လို့ ဂရုဏာ ဒေါသ နဲ့မေးတော့ အသကျကို ဖုတျလှိုကျဖုတျလိုကျရှူနတေဲ့ လူနာက ဝငျဖွတေယျ။ ” ရှကျလို့” ပါတဲ့။ ကလေးမလေးမကျြနှာကိုကွညျ့ပွီး ဒေါကျတာနှငျး မဆူရကျတော့။ အစောနက သူ့ကို para suppo ထညျ့ဖို့ ညာဘကျစောငျးခိုငျးတုနျးက သူဘာလို့ တကြှတျကြှတျညညျးသလဲဆိုတာနဲ့ အခနျးထဲက အလှနျအမငျးဆိုးဝါးစူရှစှာထှကျပျေါနတေဲ့ အပုပျနံ့ တို့ရဲ့ အဖွကေ ရှငျးသှားပါပွီ။
အနာကို ကွညျ့ဖို့လုပျတော့ သူ့ အမေ က mask လေးယူလာပေးတယျ။ အပျေါက အုပျထားတဲ့ ပတျတီးစကို ခှာခအြပွီးမှာ ပတျတီးစတှနေဲ့သိပျထားတဲ့ အနာဝကိုမွငျရပါတယျ။ အနားသားတှေ မညျးနပွေီး မကျြနှာဝခညျြးပဲ ၄-၅ လကျမလောကျရှိတဲ့ အနာကွီးက ညာဒူးအတှငျးဘကျ ဒဂေါကျခှကျနားမှာ ဒူးဆဈပွညိ့လုနီးပါးနရောယူထားလပွေီ။ အထဲက ပတျတီးစတှကေို ဖွညျးဖွညျးခငျြးဆှဲထုတျတော့ အနံ့က အုပျထားတဲ့ mask ကိုကြျောပွီး ထောငျးကနဲ့…။
ပတျတီးကုနျတော့ အနာအောကျခွကေ လကျတဈနှိုကျမြှ…ဒူးဆဈအောကျနားခွသေလုံးသား ကို တဈဝကျလောကျလှိုကျစားထားပွီး ခွသေလုံးရိုးကိုပါမွငျနရေပွီ…ဘေးတိုကျတငျမဟုတျ … အောကျကိုပါဆငျးပွီး အစှလေိုကျ လှိုကျစားထားသညျမှာ ခွသေလုံးတဈဝကျလောကျရောကျနပွေီဖွဈရာ တဈဖကျက စှပွေီးခုတျဖွတျထားသော ဝါးဆဈပိတျကဲ့သို ခှကျကွီးဖွဈနလေပွေီ။ အနာ နံရံနဲ့ အောကျခွေ ကွမျးပွငျတဈခုလုံး ပွညျစိမျးစိမျးတို့ကနရောယူထားရာ အသားနုပငျမတှေ့…သွျော မမွငျဝံ့ဆေးဆရာပါတကား။
” အမရေယျ… ကလေးက ဒီလောကျဖွဈနတောကို…. ဒီလောကျ အလိုလိုကျပွီးထားရသလား?” လို့မာနျတော့ ” ဒီတိုငျးမထားပါဘူး ဆရာမရယျ… အရပျထဲက သားဖှားဆရာမလေးချေါပွီး ဆေးထညျ့ ဆေးထိုးလုပျပါတယျ” တဲ့။ ဆရာမလေးက ညနတေိုငျးလာပွီး အနာကို အရကျပွနျနဲ့ လောငျးဆေးတယျ …ပွီးရငျ ဆေးဝါလေး လောငျးထညျ့ …ပတျတီးတှနေဲ့ ပွနျဆို့ပွီးပိတျပေးတယျ… တဈရကျခွားတဈခါလညျးဆေးထိုးသတဲ့။ ကွညျ့လိုကျတော့ ampiclox တှေ။
“မွတျစှာဘုရား …. ပိုးသတျဆေး ကို တဈရကျခွားတဈခါ ထိုးတော့ ပိုးတှကေို ဆေးယဉျအောငျလုပျပွီးမှေးသလိုဖွဈနရေောပေါ့။ ပွီးတော့ ဒီလောကျကွီးတဲ့ အနာကို အရကျပွနျလောငျးပွီးဆေးမှတော့ လူနာက နာလှနျးလို့သမှောပဲ…တကယျပွောတာ … နာလှနျးရငျ pain shock နဲ့သတေတျတယျ အမရေဲ့” ဆိုတော့
ကလေးမလေးက ” ဟုတျတယျဆရာမ…. ဆေးတဈခါထညျ့ရငျ သမေလိုအျောရတယျ… အရှငျလတျလတျ ငရဲကသြလိုပဲ” တဲ့! ဆကျမေးနလေညျး ပေါကျကရလေးဆယျ တှေ ထပျထှကျလာမဲ့ တူတူ ဆေးရုံတကျဖို့ဆှယျတရားဟောရသညျ။
” အမေ… အမေ့ သမီး ခုလိုဖြားနေ …သှေးပေါငျတှကြေ … သှေးခုနျနှုနျးတှမွေနျ… အမောတှဖေောကျဖွဈနတော ဒီလို အနာကို မှေးထားလို့ … အနာက ပိုးဝငျနပွေီ… ဘယျ အတိုငျးအတာထိဆိုးနတေယျ ဆိုတာ အမတေို့မကျြမွငျရုံမက အနံ့ပါရနပွေီမဟုတျလားလို့?? အနာထဲက ပိုးက သှေးထဲရောကျပွီး ပိုးဆိပျပြံ့တဲ့ အခါ အမသေ့မီး ဒုက်ခရောကျမယျ… ကငျဆာက ခု ခကျြခငျြး မသဘေူး… အသကျနဲ့အဝေးကွီးရှိသေးတယျ…ဒီအနာကွောငျ့ သလေိမျ့မယျ… ဆေးရုံ အမွနျဆုံးတကျပါ” ဆိုတော့ အမရေော သမီးရော ငိုပါရော..။ ခြော့တဈခါ ခွောကျတဈလှညျ့ပွောပွီးနောကျတော့ သူ့ အဖေ ရနျကုနျကပွနျလာတာနဲ့ ဆေးရုံတငျပါမယျ တဲ့… ဘယျလောကျကွာဦးမလဲဆိုတော့ ၁ ပတျ ၂ ပတျ ပေါ့
ဆရာမရယျ တယျ…။ ဟယျ… မတကျခငျ စပျကွား သသှေားရငျ ဘယျလို လုပျမလဲ ဆိုတော့ ဆရာမနဲ့ ကုမယျတယျ။ စိတျတှလေညျးညဈပါတယျ။ ” အမေ ဒီရောဂါ က ကြှနျမ ကုရုံနဲ့ မရဘူး… ရမှတော့ အမေ့ သမီးကို ဆေးရုံလှတျနမေလား” ပွောတာ့ … တုံဏှိဘာဝေ။ ” ဒါဖွငျ့ လောလောဆယျ….ကြှနျမဆေးခနျးလာထိုငျတဲ့ရကျကို ဆေးထညျ့ပေးမယျ… Wound swab လညျး ယူမယျ! ကလေး အဖေ လာတာနဲ့ ခကျြခငျြးဆေးရုံတကျပါ” ဆိုတော့ “ဟုတျကဲ့ပါ” တဲ့။ ဒီတိုငျးလညျးမထားနိုငျတဲ့ အတူတူ wound swab culture and sensitivity ယူဖို့ပွငျရတော့တယျ။ ဆေးခနျးက လေးလေး က သူပို့ပေးမယျ…အမွနျဆုံး ဆို (၅) ရကျကွာမယျတဲ့။
မတတျနိုငျ…ဆေးရုံ မတကျခငျ လုပျစရာရှိတာတော့ လုပျပေးထားရမယျ မဟုတျလား။ wound swab ယူ… အနာကို normal saline နဲ့ တဈထပျ…hydrogen peroxide နဲ့ တဈထပျဆေး…iodine နဲ့ အနာပတျလညျရော အနာထဲရော သနျ့ရှငျးရလေုပျ… ပွီးတော့မှ ပေါငျးထားတဲ့ ပတျတီးကို eusol နဲ့စိမျပွီး အနာကို ဖွညျ့ပိတျပေးရသညျပေါ့…အဲဒါကို .လေးလကျမ ပတျတီး ၅ လိပျကုနျပါတယျ အရပျကတို့။ ဘယျလောကျကွီးတဲ့ အနာလညျး စဉျးစားသာကွညျ့ကွပါကုနျ။ wound swab c & S အဖွရေရငျ ဒီအနာမှာ ဘာ ဘတျတီးရီးယား ပေါကျနလေဲ… ဘာပိုးသတျဆေး နဲ့ဆိုနိုငျမလဲ ကွညျ့ပွီး ဆေးပေးလို့ရပမေဲ့ ခုကတော့ ရိုးရိုး အဖြားကဆြေးနဲ့ broad-spectrum antibiotics ပဲပေးထားလို့ရတော့ ဒီကွားထဲ တဈခုခုဆိုလြှငျ ပပွေီးအိမျမှာမနဘေဲ ဆေးရုံပွေးဖို့လညျး မှာရသေးတာပေါ့လေ။ wound swab result ကတော့ နောကျတဈပတျ ကိုယျ ဆေးခနျးပွနျလာထိုငျတဲ့ခြိနျ ရကောငျးပါရဲ့။
ပွနျလာပွီး ၁ ရကျပဲရှိသေးတယျ … ဆေးခနျးက လေးလေးဆီက ဖုနျးလာရော။ ဧကန်တ wound swab result မြား အစောကွီးသိရလို့လား ဆိုပွီး တှေးတုနျး ” သမီးရေ….ကလေးမလေး ဆုံးပွီ” တဲ့! ရုတျတရပျ..အဖြားတှတေကျ အမောဖောကျပွီး ဆုံးတာမို့ ဆရာဝနျသှားချေါတာတောငျမမီလိုကျဘူး” တဲ့လေ။ ပနျးလေး တဈပှငျ့ကတော့ အခြိနျမတနျဘဲကွှရှောပါပွီ။ ရိုးရိုးမဟုတျဘဲ တမငျအခွှခေံရသလို ပဲ ထငျမိပါတယျ။
ဆေးရုံတကျရမှာ ကွောကျလို့… ခှဲရမှာကွောကျလို့နဲ့ ပနျးလေးတှေ ဘယျနှပှငျ့ လောကျမြား အညှာကနေ ဆှဲယူခွမှေ ခံရပွီးပွီလဲ။ ဒေါကျတာ နှငျးတို့ ဆေးကြောငျးတတိယနှဈမှာ ရကျတိုတိုငျးရငျးဆေး သငျတနျး ပို့ခမြှုရှိပါတယျ။ ဒီ တိုငျးရငျးဆေးပညာဆိုတာ စဈမှနျရငျ သိပျတနျဖိုးကွီးတဲ့ပညာပါ။ ဒါပမေယျ့… လာသငျပေးတဲ့ တိုငျးရငျးဆေး ဆရာမကွီးတဈယောကျရဲ့ စကားကို ဒေါကျတာနှငျး ခုထိကွားယောငျဆဲ။
“အပွငျမှာ ဗမာဆေးဆရာဆိုပွီး ဆေးကုနသေူတှထေဲ တိုငျးရငျးဆေး လကျမှတျရပွီးတကယျတတျကြှမျးနားလညျတဲ့ လူက ၃၀ မှာ ၁ ယောကျမရှိဘူး ကလေးတို့ရေ” တဲ့။တိုငျးရငျးဆေး ဆိုတာ ရတနာလိုပါပဲ… စဈမှနျရငျတနျဖိုးကွီးသလောကျ အတုအပတှကေလညျး ပေါပွီး ခှဲခွားရ ခကျလှပါတယျ။ အခု ကလေးမလေး အမေ ပွောသှားတဲ့ထဲက ” ဆေးထညျ့ပွီး အနာက မကိုကျတော့ဘူး” ဆိုတာလေးကို ရှငျးပွခငျြပါတယျ။
ဒီဗမာဆေးဆရာ အမညျခံတျောတျောမြားမြားက ဆေးထဲမှာ steroid ဆေးသုံးပါတယျ။ ဒီဆေးရဲ့ သဘောတရား က ရောဂါ လက်ခဏာကို ဖုံးထားပေးနိုငျပွီး နလေို့ထိုငျလို့ကောငျးစပေါတယျ (sense of well-being) … နာနရေငျ သကျသာမယျ..ယောငျနရေငျ အယောငျကမြယျ… ရောဂါပြောကျတာလား ဆိုရငျမဟုတျပါဘူး… ဒီလိုဖုံးထားပေးတဲ့ အတှကျ ရှိရငျးစှဲ အခံရောဂါ ကို မရှိတော့ဘူး ထငျပွီး ဂရုမစိုကျနရောမှ ရောဂါပိုကွှလာတတျပါတယျ။ နောကျပွီး steroid ကို နာတှမှော မသုံးရပါဘူး…အရောဂါပိုး ကိုဖိတျချေါသလိုဖွဈစလေို့ပါ!!
(၁) သှေးထဲမှာ သကွားဓာတျမြားလာမယျ.. သကွားဆိုတာ ဘတျတီးရီယား တှေ အကွိုကျပါ။( သှေးခြို ဆီးခြို သမားတှေ အနာ မကကျြနိုငျတာသာ ကွညျ့တော့) ။
(၂) ဘတျတီးရီးယားကို တိုကျထုတျပေးမယျ့ သှေးဖွူဥ အရအေတှကျကိုလြော့ကစြတေယျ။
(၃) ကိုယျခံအား ( immune ) ကိုကစြတေယျ
အဲလိုဆေးကို အနာထဲထညျ့တော့ နာတာ ခဏ သကျသာပမေယျ့ ပိုးဝငျပွီး ဘတျတီးရီယား တှေ စိတျကွိုကျပေါကျပှားတော့ ပိုဆိုးလာရငျး ခုလို septic shock ( သှေးထဲ ပိုးဆိပျပြံ့) ရာက အသကျဆုံးတဲ့ အထိ ဖွဈသှားတာပါပဲ။ ကငျဆာ နဲ့ သဖေို့က ဟိုး အဝေးကွီးလိုပါသေးတယျ။ ဒီလောကျမွနျမွနျ မသသေငျ့ဘဲ ဘာလို့ သရေသလဲဆိုတော့ မကွောကျသငျ့ မရှကျသငျ့တာ ကို ကွောကျပွီးရှကျပွီး လုပျသငျ့လုပျထိုကျတာကို အခြိနျမီ မလုပျဘဲ အားမကိုးသငျ့တာကို အားကိုးမိလို့ပါပဲ။ သူမရဲ့ အကွောငျးလေးကို လူတှသေိပွီး မဖွဈသငျ့တာမဖွဈအောငျရှောငျနိုငျကွဖို့ ဒီစာလေးကိုရေးတာမို့ သူမလညျးရောကျရာဘဝကနေ ကနြေပျဝမျးသာ ပေးနိုငျလိမျ့မယျ မြှျောလငျ့ရငျး….။